Valin'ny fanaraha-maso ny haavon'ny rano, valizy mitsingevana - Weier
Valiha mihombo 3/4 '' ao anaty valizy mitafo rano manara-penitra ny rano
Ny valizy fanaraha-maso ny haavon'ny rano mandeha ho azy dia vokatra misy patanty fa tsy floatvalve nentim-paharazana. Izy io dia mifehy mivantana ny famatsian-drano ary mijanona arakaraka ny fiovan'ny teôra.
Sakano ny fidiran'ny poti-fasika sy ny antsanga hafa amin'ny rafitry ny rano mahazaka ny tsindry ambony amin'ny rano, fanesorana mora foana, fanadiovana ary famerenana ny sivana ambony vita amin'ny tampon'ny Nylon PA66 mainty miaraka amin'ny fanoherana UV Clear PC Bowl mba hahitana rehefa mila diovina ny efijery 304Stainless Steel sivana sivana tsy harafesina mihitsy.
Ny vokatra farany anay
Wiir Brand Inside dia karazana haavon'ny rano mikoriana ...
Zhejiang Weier dia any Wenzhou China. Izahay dia iray amin'ireo famokarana voalohany amin'ny famatsian-drano napetraka, natokana amin'ny famokarana valizy fanaraha-maso haavon'ny rano mandeha ho azy sy vokatra hafa mifandraika amin'izany. Nahazo mari-pankasitrahana manana patanty maro izahay. Miaraka amin'ny ekipa matihanina matihanina, fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fitiliana mazava tsara, afaka mahay mamolavola sy OEM arakaraka ny fepetra takinao manokana izahay. Ny vokatray dia nanondrana any EropaAmericaMiddle EastSoutheast Asia sy ny firenena hafa. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Sivanin'ny rano, Valve mitsingevana amin'ny haavon'ny rano, Valve fanaraha-maso haavon'ny rano ho an'ny tanky rano, Valizy mifehy ny haavon'ny rano, Valve fanaraha-maso ny haavon'ny rano, Sivanin'ny rano indostrialy,